Basebenzisa amabhakede ukuzikhulula | News24
Basebenzisa amabhakede ukuzikhulula
UNks Thembelihle Ngcobo ekhombisa lapho bechitha khona ngamabhakede indle.isithombe: lEthiwe makhanya
ABAHLALI basemijondolo e-10 Queens Street bathi sebakhathele ukuhlala nendle endlini njengoba besebenzisa amabhakede ukuzikhulula kwazise abanazo izindlu zangasese.
Laba bahlali bathi sebehlale kule ndawo isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-25 kodwa ayikho intuthuko ekhona.
Bathi abanayo ngisho indlu yangasese eyodwa nokugcina sekuphoqa ukuba basebenzise amabhakede bese bachithe esitamukokweni esivulekile esikhona ebaleni. UNks Thembelihle Ngcobo uthe yayikhona indlu eyodwa yangasese ababeyisebenzisa ngaphambilini kodwa manje seyavalwa ngumuntu owavele waqashisa ngendawo.
“Sekuneminyaka eminingi sihlala la kule ndawo kodwa akukho ngisho intuthuko eyodwa esenzelwa yona. Uma ngabe like lanetha izulu kuphuma yonke indle igcwale ibala enye igcwale ngisho ezindlini ngaphakathi ngoba vele siyichitha esitamukokweni esisebaleni akukho okunye esizokwenza. Sibaningi kabi abantu abahlala lana kanti neMeya yoMasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo uyazi ngezinkinga zethu ngoba uma ngabe kuzovotwa bayafika la bazokhankasa kodwa ngemuva kwalokho basitshela ukuthi abayazi le ndawo,” kubeka yena.
Uqhube wathi impilo abayiphilayo inzima ngoba nezindlu abahlala kuzona zinegumbi elilodwa kuphela kanti futhi ziyavuza.
“Uthi upheka kube kukhona ibhakede khona la nizikhulula. Abanye bethu sebeze bagula baphathwa izifo ezahlukene okubalwa khona isifo sofuba i-TB kanye ne-Asthma ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwazo. Into esiyifunayo nje ukuthi sithole intuthuko okuyizindlu, amanzi nezindlu zangasese.”
Omunye umhlali uMnu Msizi Zulu uthe: “Umasipala wasithembisa ngonyaka wezi-2016 ukuthi uzosilungisela izinkinga zethu kodwa kuze kube imanje akukho okulungayo.Sifuna intuthuko nje thina kuphela ngoba phela siyavota nathi njengabahlali futhi bayayazi le ndawo yethu,” kubeka yena. Ngaphandle kokungabi khona kwenzindlu zangasese laba bahlali bakhala nangesimo sezindlu abahlala kuzona ukuthi azikho esimeni kanti futhi ziyanetha njalo uma ngabe lina izulu. Baphinde bakhale nangokungalandwa kukadoti nabathi bagcina sebezishisela bona ngoba umasipala awuzi ukuzowulanda. Imizamo yokuthola okhulumela umasipala ayiphumelelanga njengoba bengazange baphendule kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.